Legal disclaimer | Ny Fanorenana Valisoa - Ny fitiavana, ny firaisana ary ny Internet
Home Resources Legal Disclaimer
tsy misy toro-hevitra
Ity pejy ity dia ny lisansa momba ny Legal Reward of The Reward Foundation. Ity tranonkala ity dia ahitana fanazavana ankapobeny momba ny raharaha ara-dalàna. Ny torohevitra dia tsy toro-hevitra, ary tsy tokony horaisina toy izany.
Famerana ny safidy
Ny fampahalalana ara-pitsarana ao amin'ity tranonkala ity dia omena "toy ny" raha tsy misy fampisehoana na fanomezan-toky, maneho na miseho. Ny valin'ny Fanamarinana dia tsy mampiseho fisehoana na fiantohana mifandraika amin'ny fampahalalam-baovao ao amin'ity tranonkala ity.
Raha tsy manavakavaka ny fisian'ny fehintsoratra voalaza etsy aloha, ny The Reward Foundation dia tsy manome antoka fa:
• Ny fampahalalana momba ny lalàna ao amin'ity tranonkala ity dia mety ho azo atao, na misy amin'ny fotoana rehetra; na
• Ny fampahalalana momba ny lalàna ao amin'ity tranonkala ity dia feno, marina, marina, mahitsy, na tsy mamitaka.
Fampiasana serivisy sy tranokala
Ny fampiasana ny serivisy sy ny tranonkala dia tandindomin-doza. Ny Reward Foundation dia nanao ny ezaka rehetra mba hahazoana antoka fa ny votoatin'ny tranokala (votoaty) sy ampahafantarina amin'ny serivisy ireo serivisy dia marina sy havaozina ary mety amin'ny fotoana namoahana azy. Na izany aza, ny tranonkala sy ny serivisy dia omena amin'ny alàlan'ny 'as is' ary 'raha misy'. Izahay dia tsy manome antoka ny marina, ny famoahana fotoana, ny fahafenoana na ny fahavonon-tena amin'ny tanjon'ny atolotra omena ao amin'ny tranokala (s) na amin'ny alàlan'ny serivisy na amin'ny fampiasana ny tranokala (s), tsy hisy hanelingelina, virus na tsy misy hadisoana. Tsy misy andraikitra ekena na amin'ny anaran'ny The Reward Foundation noho ny fahadisoana, ny fandroahana na ny fampahalalana tsy marina amin'ny tranokala (na) na misy amin'ny alàlan'ny serivisy.
Izay fitaovana alaina na azo alaina amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy dia atao araka ny fahaizanao sy ny risika ary ho tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana amin'ny rafitry ny solosainao na ny fatiantoka very valin'ny vokatry ny fisintonana ireo fitaovana ireo ianao.
Tsy misy toro-hevitra na fampahalalana, na am-bava na an-tsoratra, azonao avy amin'ny The Reward Foundation tsy hamorona antoka na andraikitra hafa tsy voalaza mazava amin'ireto lalàna sy fepetra ireto.
Ny andraikitra feno an'ny Foundation Reward Foundation anao amin'ny fifanarahana, famerana, (anisan'izany ny tsy fitandremana) momba ireo fepetra sy fepetra ireo, ny fampiasana ny tranokala (s) sy / na ny serivisy rehetra dia voafetra ho mihoatra ny (a) £ 150.00 ary ( b) ny vidiny naloanao ara-dalàna tamin'ny The Reward Foundation araka ny fifanarahana natao ho an'ny serivisy naloa nandritra ny telo volana talohan'ny hetsika nahatonga ny fitakiana.
Ekenao ary ekenao fa ny The Reward Foundation dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana tsy mivantana, tsy ampoizina, manokana, vokatr'izany na fakan-tahaka, na noho ny fatiantoka mivantana na ankolaka, ny fidiram-bola, ny orinasa, ny vola tahiry, ny tsara na ny fotoana.
Tsy misy na inona na inona ao amin'ireto fepetra ireto sy ny fepetra apetraky ny zon'ny mpampiasa ny mpanjifa na manilika na mametra ny fatiantoka amin'ny hosoka na fahafatesana na ny ratra manokana vokatry ny tsy firaharahan'ny The Reward Foundation.
Ny votoatiny ao amin'ny tranokala (votoaty) sy omena amin'ny alàlan'ny serivisy dia natao ho fampahalalana amin'ny ankapobeny fotsiny ary tsy natao, ary tsy akory, na torohevitra ara-dalàna na tolotra matihanina na torohevitra hividianana vokatra na serivisy izay anaovana ny fanapahan-kevitra manokana dia tokony horaisina. Ny fampahalalana, ny votoatin'ny tranonkala sy ny serivisy dia tsy mifantoka amin'ny toe-javatra iainanao ary noho izany dia tsy tokony hiantehitra amin'ny votoatin'ny tranokala sy ny serivisy ianao ho fanoloana ny toro-hevitra arahin'asa.
Ny Reward Foundation dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fomba ampiasana ny atiny ao amin'ny tranokala (na ny serivisy amin'ny alàlan'ny serivisy), raha adika na inona ny fahatokisana azy. Tsy ekenay ny tompon'andraikitra amin'ny valin'ny hetsika rehetra natao tamin'ny alàlan'ny fampahalalana nomen'ny tranokala (na ny serivisy).
Tsy tokony hiantehitra amin'ny fampahalalana ao amin'ity tranonkala ity ianao ho toy ny safidy hafa amin'ny toro-hevitra avy amin'ny solicitor, Advocate, Barrister, Attorney na mpikarakara mpitsabo.
Raha manana fanontaniana manokana momba ny raharaha ara-dalàna ianao dia tokony hifantoka amin'ny solicitor, Advocate, Barrister, mpisolovava anao na mpanome tolotra ara-pitsaboana hafa.
Aza misalasala mitady torohevitra ara-dalàna, tsy miraharaha torohevitra ara-dalàna, na manomboka na miala amin'ny hetsika ara-dalàna noho ny fampahalalana ao amin'ity tranonkala ity.
Tsy misy na inona na inona ao anatin'ity fampiharana ara-dalàna ity dia mametra ny mety amin'ny lafin-javatra rehetra izay tsy avela eo ambanin'ny lalàna tapak'andro, na manaisotra ny sasany amin'ireo trosantsika izay mety tsy azo ekena eo ambanin'ny lalàna manan-kery.
Hetsika ivelan'ny fanaraha-maso antsika.
Manazava io fehezan-teny io fa tsy tompon'andraikitra amin'ny zava-mitranga ivelan'ny fifehezantsika isika.
Ny valisoa Goavana dia tsy tompon'andraikitra na tompon'andraikitra amin'ny tsy fahombiazan'ny fanatanterahana na, na fanemorana ny fanatanterahana, na inona na inona andraikitsika eo ambanin'ireto Karazan-kevitra sy fepetra ireto na fifanarahana mifandraika eo amintsika, vokatry ny fisehoan-javatra ivelan'ny fanaraha-maso antonony antsika ("Force Majeure" ).
A Force Majeure Event dia misy hetsika, hetsika, tsy misy tranga, tsy fetezana na loza tsy mihoatra ny fifehezantsika tsara ary tafiditra amin'izany indrindra (tsy misy fetra) ireto manaraka ireto:
Famelezana, hidin-trano ary hetsika indostrialy hafa.
Niteraka korontana, korontana, fanafihana, fanafihana mpampihorohoro na fandrahonana ny mpampihorohoro ny ady, ady (na nambara na tsia) na fandrahonana na fiomanana amin'ny ady.
Afo, fipoahana, tafiotra, tondradrano, horohoron-tany, famatsiana, valanaretina na loza hafa voajanahary.
Tsy mety ny fampiasana lalamby, fandefasana, fiaramanidina, fitaterana môtô na fomba hafa fitateram-bahoaka na tsy miankina.
Tsy fahombiazan'ny fampiasana tambajotra fifandraisan-davitra ho an'ny daholobe na tsy miankina.